Isitudiyo esikhulu eduze neCrocus City
Krasnogorsk, Moskovskaya oblast', i-Russia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ирина
Isitudiyo esikhulu esikhanyayo esingama-39m
Inemibhede eyi-double emi-2 kanye nosofa wokulala emi-2.
Ikhishi lifakwe izinto zikagesi: isiqandisi, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, ihhavini ye-microwave, umshini wekhofi, iketela, kanye nesomisi sezinwele, insimbi, izinsimbi zokuqondisa izinwele.
Isitudiyo sitholakala ekhelini: Molodezhnaya Ul., House 2, endaweni yokuhlala yaseMolodezhny. Lena inkimbinkimbi yezindlu ezinendawo yokuhamba evaliwe, azikho izimoto, ezinenani elikhulu lezinkundla zokudlala, izinkundla zemidlalo zemidlalo, amaveranda, amathilomu, izitolo, njll.
Isisefo sama-Keys sifakwe eduze kwefulethi, esizokuvumela ukuthi ungene noma uphume noma kunini.
Imizuzu engu-10 uhamba ngezinyawo ukuya ku-Penyagino MCD (futhi uzozithola ngokushesha enkabeni yeMoscow); eduze neCrocus Expo, isikhungo sezitolo saseVegas, ipaki yaseMitino kanye nenani elikhulu lamathilomu nezitolo; I-Oceanarium kanye ne-promenade enhle; eduze kwendlu kaMcDonald kanye nomthambeka Wonyaka wonke we-ski "Snezh.com"
4.90(10 okushiwo abanye)
Eduze kukhona iPenyagino MKD -12 imizuzu ngezinyawo, isiteshi sikamasipala iMyakinino, iCrocus City, isikhungo sezitolo saseVegas, ipaki iMitino, iOceanarium, iMitino green park, i-promenade .... Kanye nenani elikhulu lezindawo zokudlela, amathilomu nezitolo
Ngihlala ngithintana nezivakashi, kodwa angiziphazamisi ngesikhathi sokuhlala kwazo
UИрина Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Krasnogorsk namaphethelo